Uphengululo lweZTE Spro2: Iprojektha ephathekayo, enamandla kunye nexabiso eliphantsi | Iindaba zeGajethi
UPablo Ortega | | ngokubanzi, Umfanekiso kunye nesandi, Abadlali, Reviews
Inkampani ye-ZTE isebenzisane ne-US ye-AT & T ukumilisela i-exclusive iprojektha ephathekayo efikelelekayo. Ukonwabela iimovie "kwiscreen esikhulu" ekhaya, okanye naphi na, kunokwenzeka ngenxa yale projekthi incinci, kodwa inamandla.
1 Isebenza njani
3 I-Hotspot ikwabandakanyiwe
4 Awunayo iWifi okanye i-LTE? Uhakuna Matata
5 Ukucaciswa kweTekhnoloji ye-AT & T ZTE Spro2
I-ZTE Spro 2 incinci ngobukhulu, kodwa inzima noko, nangona kungonwabisi ukuyiphatha. Ibe ibhetri enamandla eya kusivumela ukuba siyisebenzise ngaphandle kokuyifaka kwi-mains isithuba esingangeeyure ezimbini ezinesiqingatha, ukuba sibukele imovie, ngoko singaya nayo naphi na.
Ukuyiphatha, konke esikufunayo kukuya kweyakho ikhusi ezintlanu intshi kunye nokusebenza kwayo kuyinto enomdla kakhulu, ngakumbi kwabo basebenzisi abasetyenziselwa inkqubo yokusebenza ye-Android. Kwisikrini sayo esiphambili, kwicala lasekhohlo, siya kufumana ukhetho lokwenza uhlengahlengiso kwiprojektha. Ngelishwa, i-Spro 2 ayihlanganisi ivili elisivumela ukuba sihlengahlengise ubukhulu bomfanekiso okwisikrini okanye eludongeni, olusinyanzela ukuba sizonge okanye siphume ngokuxhomekeke kubungakanani bomfanekiso esifuna ukuwenza.
Eminye imenyu kulula ukuyiphatha, njengoko ibandakanya iinkqubo zemveli ze-Android (njengephakheji kaGoogle, ngeGmail kunye noMculo kuGoogle, umzekelo kwaye ngaphandle kokungahoyi YouTubeEwe kunjalo) kwaye siya kuba nokufikelela ngokuthe ngqo kwiVenkile yokuDlala kuGoogle ukukhuphela nasiphi na isicelo esisifunayo). Enye ayinakuphoswa, ewe, kunjalo Netflix, eya kusinika amava okwahluka okwahlukileyo kunye nokunethezeka, ngexabiso elifikelelekayo.
Umvelisi wase-China u-ZTE wenze umsebenzi omkhulu kweli sebe, ngakumbi ukuba sithelekisa I-ZTE Spro 2 kunye nomanduleli wayo, iZore Projekti yeHotspot. Iprojektha igutyungelwe kwityala lealuminium ebonakalayo yiplastiki, ke ukuba asifuni monakalo kwipeyinti, kufuneka silumkele amaqhuma kunye nokukrwela.
Iscreen sokuchukumisa sisusela kwii-intshi ezine ukuya kwezintlanu kwaye nayo resolution, efikelela ngoku nge-1280 x 820 pixels. Inkqubo yokusebenza edibeneyo yi-Android 4.4 KitKat eneempawu ezimibalabala eziqhuba ukuhamba.
Ubukhulu bayo buli-134 x 131 mm, ubukhulu be-31 mm kunye nobunzima be-550 gram.
I-ZTE ifuna ukuba sikwazi ukonwabela iprojektha yethu naphina. Ngenxa yoko, isixhobo sinebhetri yangaphakathi kwaye sikwadibanisa neHotspot. Ne Isantya se-LTE esibonelelwe yi-AT & T. Singamthatha umdlali naphina kwaye sikonwabele ukusasaza imovie ngaphandle kokulahleka komgangatho (ewe, kuya kufuneka siphephe indawo ezixineneyo).
Nge I-hotspot eyakhelwe kule ZTE Spro 2 Singabelana ngodibaniso lweprojektha yethu ukuya kuthi ga kwizixhobo ezilishumi ngexesha elinye. Ke ngoko, ayizukukwazi kuphela ukujonga i-intanethi kwiprojektha ngokwayo, kodwa siya kuba nakho ukubonelela ngoqhagamshelo kubahlobo bethu kunye nosapho kunye nokwabelana ngeefayile kuthungelwano lwabucala.
Awunayo iWifi okanye i-LTE? Uhakuna Matata
Enye into elungileyo kule projektha kukuba ibonelela ngamazibuko aliqela avumela ukuba sikwazi ukuvelisa ngokukhawuleza nayiphi na ividiyo, iaudiyo okanye intetho (efanelekileyo yeofisi). I-ZTE Spro 2 inezibuko lokufaka I-USB, i-HDMI kunye nomfundi wekhadi le-MicroSD. Olunye ukhetho kukwenza unxibelelwano lweWi-Fi ekhaya okanye emsebenzini ukuba babelane ngalo naluphi na uhlobo lwefayile phakathi kweprojektha kunye neekhompyuter. Ngaphakathi kwiprojektha sinokugcina ukuya kwi-16GB yeefayile.
Ezi zibuko zandisa amathuba okusebenzisa isixhobo, esingasebenzi njengeziko lezolonwabo kwimultimedia, kodwa linokusetyenziselwa Imiboniso eklasini, emsebenzini, okanye nokubukela imovie epakini. Umfanekiso unokuqikelelwa ngomgangatho owaneleyo kunye nobukhali nakweyiphi na indawo ethe tyaba. Senze iimvavanyo eludongeni olutyheli, ukufumana iziphumo ezilungileyo. Sikwathenga iphaneli emhlophe kwaye umgangatho womfanekiso ubulungile.
Uqikelelo lunokufikelela kwiinyawo ezilishumi (ngaphezulu nje kweemitha ezintathu), kodwa izithethi aziyi kuba namandla kakhulu ukuba sifuna ukuzisebenzisa, umzekelo, ngaphandle. Kule nto kuyacetyiswa ukuba usebenzise isinxibelelanisi sejack ukudibanisa izithethi ezinamandla okanye sinokusebenzisa indlela ye- isixhobo soqhagamshelo lweBluetooth.
Ukucaciswa kweTekhnoloji ye-AT & T ZTE Spro2
• Iprojektha ye-LM engama-200.
• Ibhetri enobungakanani be-6300 mAh.
• Ubomi bebhetri ekusasazeni: iiyure ezingama-2.5 malunga.
• Ubomi bebhetri bokuhamba: iiyure ezili-16.
• Inkqubo ye-Snapdragon 800.
• Umthamo wokugcina we-16GB.
I-Hotspot enezixhobo ezilishumi ezixhume ngaxeshanye.
• I-Dual Band: sinokukhetha phakathi kwe5GHz okanye 2.4GHz.
• Izibuko le-HDMI.
• Izibuko le-USB.
• Umfundi wekhadi le-SD.
• Inkqubo yokusebenza yeKitKat 4.4
Iprojektha ephantse ukuba ineengcali ngexabiso elinokufikeleleka esinokulisebenzisa phantse naphina. Sigxininisa ibhetri yayo, uqhagamshelo lwe-LTE kunye nomgangatho.
Awunakulawula kakhulu kumgangatho womfanekiso kunye nokuma kwawo. Izithethi ezakhelweyo aziboneleli ngomgangatho ophezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Abadlali » Uphengululo lweZTE Spro2: Iprojektha ephathekayo, enamandla kunye nexabiso eliphantsi
Kukho intetho engakumbi ngayo yonke into ngaphandle komgangatho wobungqina
Iingcebiso ezili-10 zokugcina ubomi bebhetri kwi-smartphone yakho